Gịnị bụ casinos ndị a ma ama gburugburu ụwa? - 429jp.info
MGM Grand Online Casino Na-atụ aro Hotel na Casino
Nke Blackstone Group nwere 온라인 카지노 사이트 리스트 MGM Growth Njirimara ma wuo ya na 1993. O nwere ime ụlọ 6,852 ma were ya dịka ụlọ nkwari akụ kachasị ukwuu n’ụwa mgbe ọ mepere. Casinolọ ịgba chaa chaa a nwere ebe mgbakọ, ọdọ mmiri 5-n’èzí, mmiri iyi, osimiri, ogige ogige, nnukwu spa, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ ịgba egwu abalị, ọtụtụ ụlọ ahịa, na ụlọ ịgba chaa chaa.
Enweghị ụzọ ọ bụla mmadụ nwere ike isi gwụ ebe a n’ihi ọtụtụ nhọrọ ntụrụndụ nke ụlọ nkwari akụ na cha cha nwere. Ọ bụghị naanị na ị ga-enye gị ebe ịgba chaa chaa, mana gị na ezinụlọ gị nwere ike ịnụ ụtọ ịnọ ebe a na nnukwu ụlọ ha mara mma.
Ebe a mara mma, ụlọ nkwari akụ okomoko, na cha cha dị na US. Casinolọ cha cha a dị egwu zuru oke maka nnukwu rollers, ebe a naghị ele ya anya dị ka otu n’ime casinos kachasị mma na US, kamakwa otu n’ime ihe kacha mma. Ha nwekwara cha cha chara n’ịntanetị maka ndị na-enweghị ike ịpụ igwu egwu.
Casinolọ cha cha a nwere nnukwu ụlọ ịgba chaa chaa na ihe karịrị puku 2 puku oghere ịhọrọ. Ndị ọkachamara na-egwu egwuregwu na-egwuri egwu ebe a n’ihi oke ite nwere ike ịgafe ihe karịrị otu nde.
Ebe nkiri ị ga-ahụ ebe a gụnyere ogige nchekwa na ahịhịa ndụ, isi iyi ndị mara mma, veranda nke ọmarịcha nka, gbakwunyere ọtụtụ ụlọ nri ebe mmadụ nwere ike iri nri nkeonwe, ọdọ mmiri ma ọ bụ iri nri n’ime ụlọ. Nhọrọ gụnyere Le Cirque, Picasso, Jasmine, Lago, Fix, The Buffet, na ndị ọzọ.
Obí nke Ceasar
Hotellọ nkwari akụ ọzọ mara mma na ịgba chaa chaa mara na Nevada, United States. Ha guzobere ebe a na 1966, nke nwere ime ụlọ na nnukwu ụlọ 3,960. E nwekwara ebe a na-anọ enwe mgbakọ nke nwere ike ịnabata ọtụtụ ndị ọbịa.
Lọ nkwari akụ ahụ abụwo ebe a na-anọ akụ egwu, na egwuregwu dịka egwuregwu ịkụ ọkpọ. The Colosseum bụ ihe ọzọ mgbakọ ebe concerts-eme dị ka ọ pụrụ oche karịrị 4,000 ndị mmadụ.
Casinolọ cha cha Ceasar, nke ruru mita 4,500 buru ibu, nwere ọnụ ụlọ poker na-arụ ọrụ 24, igwe oghere, igwe akụrụngwa vidiyo, egwuregwu poker vidio, blackjack, keno, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Reslọ oriri na ọrantsụrantsụ dịkwa ọtụtụ ebe ndị isi ama ama dịka Gordon Ramsay, Bobby Flay, Wolfgang Puck, Brian Malarkey, tinyere ndị ọzọ, mepere ụlọ nri ha ka ndị mmadụ wee nwee ọ enjoyụ na onyinye ha dị ukwuu.
Cha cha nke Monte Carlo (Monte Carlo, Monaco)
Casinolọ cha cha a bụ otu n’ime ebe kachasị mma maka ịgba chaa chaa n’ihi nhọrọ dịgasị iche iche nke egwuregwu okpokoro, gụnyere ụlọ ịgba chaa chaa nke ndị na-egwu egwu. Egwuregwu okpokoro gụnyere Punto Banco, Trente & Quarante, Chemin de Fer.
Casino de Monte Carlo na-etu ọnụ maka ihe ịchọ mma dị mma yana ọmarịcha ụlọ Belle Époque. Nwa amaala Monaco enweghị ike ịbanye n’ime ụlọ egwuregwu.
Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha adighi mma na Germany
Ha wuru ebe a na 1824, ndi ogaranya choro ebe a ka ha gbaa chaa chaa. Casinolọ cha cha a makwaara maka ịnabata isi ihe dịka asọmpi nke chess, nzukọ NATO, na kọmitii Olympic.
Ndị ọgaranya ịgba chaa chaa bara ọgaranya ga-enwe ọmarịcha ahụmahụ ebe a, ha nwere ike ịkwụ ụgwọ ụgwọ nnabata dị oke ọnụ. Enwekwara uwe ejiji na ndi na-agba chaa chaa ga-agbaso.
Egwuregwu dị n’ime cha cha gụnyere roulette, blackjack, Texas Hold’em enweghị oke, igwe oghere, na Ultimate Poker.
Casinolọ cha cha a bụ ihe mmụọ nsọ nke writer 온라인 카지노 사이트 onye edemede Russia bụ Fyodor Dostoyevsky mgbe ọ na-ede akwụkwọ akụkọ ama ama ya akpọrọ Gambler.
Onye Venice na Macau
Ọ dị na Cotai Strip ma were ya dị ka nnukwu cha cha dị na Macau. Ha guzobere cha cha a na 2007 ma nwee oghere egwuregwu nke ihe karịrị 500 square feet Obodo Italy nke Venice kpaliri isiokwu eji na cha cha a, jiri otu ihe ahu e si na cha cha puta na Las Vegas.
Venetian dị na Macau nwere opekata mpe ụlọ nkwari akụ 3,000 tinyere ụlọ nri na ebe iri nri dị iche iche. Gameslọ egwuregwu na-egwu egwuregwu dị ka poker, craps, oghere vidio, roulette, na blackjack.
Ogige Cotai Arena nke dị n’ime ogige ahụ bụ ebe a na-eme n’ime ụlọ maka ihe nkiri, egwuregwu, tinyekwa egwuregwu na egwuregwu ndị ọzọ.
Marina Bay Sands dị na Singapore
Ogwe cha cha ebe a nwere ebe egwuregwu 600 na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oghere 1500 ebe ị nwere ike igwu egwu na afọ ojuju gị. Casinolọ cha cha a nwere ebe karịrị oghere 15,000 nke ebe egwuregwu na Marina Bay Sands Resort.
Enwere ime ụlọ 2,561 na họtel a, gbakwunyere ebe mgbakọ 온라인 카지노 사이트 목록, ebe ngosi ihe mgbe ochie, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ihe nkiri, pavilions, ihe ngosi nka-sayensị, ọdọ mmiri, ụlọ ịgba egwu abalị, ubi, na ụlọ ahịa.
whу ị ga – agaghị enwe ọzara lаnd bаѕеd cаѕinо
Ebe ebe casinos kacha elu US dị:
* Hotellọ nkwari akụ STRAT, Casino & Skypod
* MGM Grand Hotel na Casinos
* Onye Venetia
* Aria Resort na cha cha
* Obodo Cosmopolitan nke Las Vegas
Chicago mpaghara casinos
* Hollywood cha cha Aurora
* The Majestic Star cha cha & Ebe ezumike
* Osimiri cha cha
* Blue Mgbawa cha cha & nkwari akụ
* Nnukwu cha cha cha cha
* Hollywood cha cha Joliet
* Horseshoe cha cha – Hammond
* Bogbọ mmiri
* Ebe ezumike nke Harrah
* Ortslọ nkwari akụ Resorts
* Siza dị na Atlantic City
* Alaeze Ukwu City Casino
* Nnukwu ego cha cha
* Ebe ntụrụndụ World Casino
* Elu Casino
* Otu ndị NYC Poker
* Lolọ ezumike Foxwood
* Ogige City Casino
* EAG cha cha
* Ndị ọkachamara cha cha nke NY
* Poker na NYC
* Seneca Buffalo Creek cha cha
* Ebe ntụrụndụ World Catskills
* Point ebe cha cha
* Ntụrụndụ n’ọdọ mmiri
* Yellow Brick okporo ụzọ cha cha
* Parx cha cha na ọduọ
* Casinolọ cha chahouse
* Ndagwurugwu Forge Casino
Ọsọ Oké Osimiri Mississippi
* Beau Rivage cha cha
* Hard Rock Hotel na cha cha Biloxi
* New Palace cha cha Point Cadet
* Ngwongwo ọla edo
* Ọlaọcha Slipper Casino Hotel
* MGM Ukwu Detroit,
* Clọ oriri na ọ Motorụ Motorụ MotorCity Casino
* Greektown Casino-Hotellọ oriri na ọ .ụ .ụ
Baltimore – Washington Mpaghara Metropolitan:
* Dị ndụ! Casino na nkwari akụ
* Horseshoe cha cha
* Cha cha na Ocean Downs
* Rocky oghere Casino Resort
* Hollywood Casino na Kansas Speedway
* Casinolọ oriri na ọ Harụ Harụ Harrah na Hotel
* Argosy Casino Hotel na Spa
* Isle nke Capri cha cha
* Diamond Jacks cha cha
* Boomtown cha cha na nkwari akụ
* Ameristar cha cha
* Nwanyị Nwanyị
* Ebe Lumiere
* Ugwu Airy Casino Resort
* Ọdọ Charles, Louisiana
* L’Auberge cha cha ezumike
* Ihe ọlaedo
* Ime Anwansi
* Anyanwụ dị n’akụkụ ọwụwa anyanwụ
* Uldlọ Nkume
* Sam’s Town cha cha
* Arizona Charlie si
Kedu ihe enweghị ego cha cha?